SSC Ma Argagixisaa?!
Wq. Maxamed Baashe X. Xasan Feb. 12, 2011
“Rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi
Mase inaannu nahay oo tolliimo meerto noo tahay”
Saahid Qamaan “Waa hadal-tiro iyo hadaaq madhan midnimo “muqaddas ahi”! Sida midnimada Soomaali Weynimadu aanay muqaddaska u ahayn; ayaa ta Somalilandnimaduna aanay u barakaysnayn……..!”
Berigii aannu jabhadda ahayn ee halgankii hubaysnaa ee SNM iyo SSDF 1980-aadkii ee qarnigii hore, ayaa waxa aannu la yaabi jirney weedhihii ay ku hadaaqi jireen madaxdii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ee aannu ka horjeedney. Weedhahaas waxa ka mid ahaan jirey “Mahbarku ama Qurmistu waa koox dabadhilif u ah cadowga ummadda oo lagu adeegto iyo inammo yar yar oo ay duufsadeen!” Muraqa laba-suul ninba si buu ku ahaa shalayto.
Iyada oo wakhtigaas ay hadda 30 sano ku dhowaad ka soo waaddey, ayaynu ka maqlaynaa afka mas’uuliyiinta Somaliland weedho “raqiisnimo iyo bar-kuma-taalnimo ka muuqdaan oo kuwaas gaboobey u dhigma nuxur ahaan. Iyaga oo ka hadlaya colaadda sokeeye ee naxdinta iyo hurgumada leh ee degaanka Kalshaale ee degmada Buuhoodle, ayaa waxa ay saddexda xisbi qaran ee Somaliland soo saareen odhaah saxaafadeed toddobaadkan dhammaaday badhtankiisii.
Madaxda xisbiyadu iyaga oo “isku raacsan” waxa ay innoo sheegeen in shacabka degaanka Buuhoodle aanu wax lug ah ku lahayn dagaallada iyo colaadaha degaankaas ka jira, hase yeeshee ay dagaalladaasi oogayaan koox dabada ku haysa waxa ay ugu yeedheen argagixiso, loona baahan yahay in dadka degaankaas laga dhex saaro kooxdaas fadqalallada kula dhex jirta. Muruqa laba-suul ninba si ku ah maantana!
Run dhadhankeed tolow taasi ma yeelan kartaa?
Malahayga SSC ayaa looga jeedaa. Hase yeeshee xaggee argagixisada iyo SSC isugu yimaaddeen. SSC miyaanay ahayn urur hab qabali ah u unkamay sidii kuwii hore oo kale (SSDF, SNM, USC iwm) oo haysta inta ay doonto ha le’ekaato’e taageerada shacabka degaannada Sool, Sanaag Bari iyo Degmada Buuhoodle, si kale haddii loo dhigo taageerada in badan oo ka mid ah qabiilka Dhulbahante; gudo iyo dibadba; in ka badan inta Somalilandnimada u hanuunsan. Waa run oo SSC waa Somaliland-diid. Ma ogola in ay hoos hadhsadaan calanka Somaliland. Waa se arrin mabda salka ku haysa. Hase yeeshee taasi ka dhigi mayso wax aanay ahayn; Argagixiso! Intaas waxa dheer saluugga weyn iyo caddaalad darrada ay dadka degaankaasi ka tirsanayaan maamulka Somaliland, gaar ahaan saami qaybsigii mansabyada dawladeed ee maamulkan hadda talada hayaa cuskaday beegaal ahaan. Taas oo dad badan sii fogaynaysa, kuna riixaysa u janjeedhsiga dhinaca SSC.
Waxa kale oo iyana arrinta mus dheer iyo dalow madow ka shalwinaysa tuuryo ahaan ereyada mas’uuliyad darradu ka muuqato ee ka soo yeedhaya madaxda qaranka Somaliland sida kuwan saddexda xisbi war-saxaafadeedkooda u xambaariyeen.
Waa hadal-tiro iyo hadaaq madhan midnimo “muqaddas ahi”! Sida midnimada Soomaali Weynimadu aanay muqaddaska u ahayn; ayaa ta Somalilandnimaduna aanay u barakaysnayn! Midnimo waxa ay wadajir yeelataa marka ay ku qotonto tiirar la isla qaatay nuxur ahaan oggolaanshahooda, laguna saleeyo gundhigyo caddaalad iyo horumar tiigsi ah iyo isirro ummadnimo oo la wada ilaashanayo dooc iyo dareen qanaacaddooda.
Colaadda Kalshaale ma lahayn haba yaraato’e midabbo siyaasadeed. Laba beelood oo is feedh dega, isu wada ah “xidid” iyo “xigaal” iyo “xundhuro” isku yaal yaal, ayay xurguf dhuleed ka dhex oogantey. Lama-arag iyo arrin ugub ah taasi kuma ahayn oo weligoodba tan oo kale iyo tu ka daraniba way ku iman jireen oo u soo joogi jireen, waanay yaqaanneen tabta iyo xeesha lagu furdaamiyo. Haddase waxa aad mooddaa in aanay waxba gacmahooda ugu jirin oo ay labada dhinac ka kala kulaalayaan laba dab oo labada dhinac u sii kala firdhaya. Hargeysa, Garoowe iyo Muqdisho inta ka dhaxaysa maxaa filqiyey arrintii Kalshaale ee dhawrka goof ku saabsanayd! Arrintan oo kale Burco iyo Laascaanood lagama dareemi jirin oo inta halkaas wada joogtaa ku fillaan jirtey. Haddase “tus baa jira!” oo waa “dhako kale”!
Haddii aynu SSC ku metello SNM-tii 1980-aadkii, Dawladda Somalilandna ma ku tilmaami karnaa tii Soomaaliya ee ayaamahaas oo kale? Qolyaha kale ee Garoowe, Degaanka Soomaalida ee Itoobiya (Kililka 5aad) iyo Xamar ka soo qudhinayana “Ka-daraa u magac bixin”! Sawir kaas hore u eg (kii 1980-aadkii) iyo isma dhaanto uun, ayaa ka soo baxaysa uur-baadhka hoose ee arrimahan. Welise quus lama gaadhi karo. Wadahadal iyo waanwaan nabadeedina sidii bay albaabbada u hor yuuban yihiin oo u garaacayaan, welise uma furna dhego gufaysani.
Kalshaale oo meel xoolo daaqeen ah lagu celiyaa (dhawrka goof la asaa) oo beelaha wada degaa taas wada garwaaqsadaan waa meel wax laga bilaabi karayo.
Dawladda Somaliland oo wixii dhacay tuurta ku qaadata oo bixisaa waa tallaabo labaad oo hore loo qaadi karo.
Wadahadal toos ah oo SSC iyo taageerayaasheeda Somaliland la gashaa waa arrin kale oo caaqiibo iyo cidhib wanaag laga quuddarrayn karayo.
Af-gurracan iyo hunbaallayn siyaasi ahi waxa ay daahinayaan in dabka colaadeed ku sii baaho hurid ahaan degelladaas iyo dadkaas ehelka, qaraabada iyo hilbaha is wada dhalay ah ee aanay cid isaga sokaysaa jirin.
Waa la doogiye yaan la dacaroon, maalmihiina qaar baa dambeeya!